Popular ubuchwepheshe wasinika ikhono ukuxhumana nabanye ngaphandle wahamba yakho esihlalweni, buka ama-movie kusuka yakho kusofa, ukufunda izilimi, ngaphandle Kwenzekani ngaphandle. Nokho, into eyodwa ukuthi asikwazi esikhundleni - lena ukudla okukhulu ekhaya. Namuhla yonke indawo kuvula omkhulu inani zokudla nezindawo zokudla, inhloso zazo okungukuthi ukuba izivakashi umxhwele yabo enkulu Culinary wamathalenta. Omunye walena uwukuba izindawo ezanele ethandwa eMoscow kuyinto yokudlela "Sevgilim". On the "Academic" metro station elitholakala Ul. Iningi Cheremushkina, lapho le yokudlela itholakala. A isici esihle esimweni esingajabulisi ukusondela ukuba esihle ezokuthutha angaphansi komhlaba. "Sevgilim" yokudlela has a yokupaka esikhulu kuqashelwe, futhi izivakashi zithé ngokweqisa utshwala, ukuqasha itekisi.
Ekuqaleni, indawo yalesi ekhoneni ukuminza elise abavamile Soviet zemifino esitolo. Ngemva kokuwa eU.SSR eMoscow aqala ukufika abasuka emazweni angomakhelwane. Kancane kancane esesikhundleni niche market ukuthengisa izithelo, imifino, atakzhe ekwenzeni yokudlela ibhizinisi. Ngesikhathi esifanayo endaweni umhlaba ngaphansi umagazini wethu isithakazelo wathengiswa, futhi isakhiwo ladilizwa. Esikhundleni salo kwakukhona esinezitezi ezimbili lapho yokudlela itholakala futhi "Sevgilim".
Azerbaijan - izwe nge izisekelo zalo nasemasikweni alo. Akumangazi ukuthi le nhlangano okuningi ukhumbuza isiko kulesisizwe. Indawo yokudlela "Sevgilim", ngokuvumelana Ongoti, kungcono uhlobo ucezu Baku e enkabeni yeRussia. Ingaphakathi isikhungo iyamangalisa: Uphahla lwangaphakathi eliphezulu ngaphakathi ngemishayo omkhulu wokhuni, ebusweni usuphelile itshe elimhlophe, izintaba ezinhle ezindongeni futhi amatshe. Stucco nemengamo yokuxhuma izindima ikamelo egumbini, oqoshiwe, ezisontekile futhi nokwelukiweyo ifenisha - umkhathi ebukekayo futhi beckons ubuhle baso. Wena ikani azihlukanise ngaphandle kwamanye amazwe izilenge ezithambile izicubu, ukuze kungabikho muntu wephule yakho ngokuthula.
Kungaphawulwa nkulu ahlula: party yenkampani, weminyaka, lokuzalwa noma emshadweni - yokudlela "Sevgilim" has isikhala esanele. Inani izivakashi ukuthi kungathatha sikhungo ngesikhathi, abantu 250. Ehlobo zikhona izindawo ku le verandas. Yokudlela Inekamela VIP abantu abangu-10.
Ekuqaleni ekhishini lapho izivakashi Umenyiwe zama, kwaba Azerbaijan kakhulu. Nokho, isikhathi siyaphela umshawushile. Ukuze ugcine amaklayenti, udinga ezihlukahlukene. Indawo yokudlela "Sevgilim", namuhla abazinhliziyo imenyu ihlanganisa isiRashiya, isi-Uzbek, cuisine European futhi Japanese, futhi uye walungiselela ke. Kuyathokozisa kebabs esihlwabusayo okuphekwe isobho, futhi sushi. Futhi labo nabanye, futhi kwengxenye yesithathu izinhlobo eziningana on the imenyu. Kebab, pilaf, amasobho, amakhambi fresh nemifino elimnandi kahle ububanzi omangalisayo ewayinini eligciniwe zewayini yokudlela.
Izikhungo kanye hlelo
Iningi ukudla kusukela labapheki upscale Ngokuphazima kweso kuzoletha oweta. Uma ekhishini, futhi ingaphakathi esilindele komuntu cishe zonke izivakashi yokudlela, inkonzo kunemibono ehlukene. Ezinye izivakashi awujabuli alacrity namasiko oweta. Abanye ungathandi umculo kanye nemibukiso.
amahora Ukusebenza kanye namasevisi ezengeziwe
Indawo yokudlela "Sevgilim" usebenza ubusuku nemini izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Lesi sikhungo sinikeza uhlelo uku-oda ezifana "poppy-drive". Futhi uma indlala atholakala ehhovisi noma ekhaya, futhi leso sikhathi ukuze alungiselele ukudla, okuyinto ayifuna ngabomvu entula, thina nihlela ukulethwa endaweni dislocation.
Abapheki engcono emhlabeni: Top 15
Cafe "Chocolate", Lipetsk imenyu isilinganiso isikolo Izibuyekezo
Chain zokudlela "Muromets Ilya". E Moscow: izithombe kanye izibuyekezo zezivakashi
Novodvorskaja - ngubani yena? Novodvorskaja Valeria Ilinichna. Novodvorskaja: Biography